Exodus 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Abakan biara a ɔyɛ ɔbarima no yɛ Yehowa dea (1, 2)
Paanoo a Mmɔkaw Nnim Afahyɛ no (3-10)
Abakan biara a ɔyɛ ɔbarima no, fa no ma Onyankopɔn (11-16)
Ɔmaa Israelfo de wɔn ani kyerɛɛ Ɛpo Kɔkɔɔ no ho (17-20)
Omununkum dum ne ogya dum (21, 22)
13 Yehowa san ka kyerɛɛ Mose sɛ: 2 “Abakan biara a ɔyɛ ɔbarima* wɔ Israel no, hyira no so* ma me. Sɛ ɔyɛ ɔbarima a odi kan oo, sɛ aboa a ɔyɛ onini a odi kan oo, ɛyɛ me dea.”+ 3 Ɛnna Mose ka kyerɛɛ nkurɔfo no sɛ: “Monkae da a woyii mo fii nkoafi wɔ Egypt no,+ efisɛ Yehowa de nsa a ɛyɛ den na eyii mo fii ha.+ Enti ɛnsɛ sɛ mudi biribiara a mmɔkaw* wom. 4 Morefi ha nnɛ wɔ bosome Abib* mu.+ 5 Sɛ Yehowa de mo du Kaananfo, Hitifo, Amorifo, Hiwifo, ne Yebusifo+ asaase a nufusu ne ɛwo abu so wɔ so+ a ɔkaa w’agyanom ntam sɛ ɔde bɛma mo no so a,+ monyɛ saa amanne yi wɔ bosome yi mu. 6 Ɛsɛ sɛ mudi paanoo a mmɔkaw nnim nnanson,+ na da a ɛto so ason no mubedi Yehowa afahyɛ. 7 Enti munni paanoo a mmɔkaw nnim nnanson;+ na ɛnsɛ sɛ wohu biribiara a mmɔkaw wom wɔ mo nkyɛn+ wɔ mo asaase so baabiara. 8 Saa da no, ka kyerɛ wo ba sɛ, ‘Nea Yehowa yɛ maa me bere a mifii Egypt no nti na mereyɛ eyi.’+ 9 Na eyi bɛyɛ te sɛ ahyɛnsode wɔ wo nsa ho, na ayɛ sɛ biribi wɔ wo moma so* a ɛbɛkae wo.+ Eyi bɛma woaka Yehowa mmara ho asɛm, efisɛ nsa a ɛyɛ den na Yehowa de yii wo fii Egypt. 10 Afe biara, bere no du a, kae na di saa ahyɛde yi so.+ 11 “Sɛ Yehowa de wo du Kaananfo asaase so, sɛnea waka wo ne w’agyanom ntam sɛ ɔde bɛma wo no a,+ 12 abakan biara a ɔyɛ ɔbarima,* ne nyɛmmoa anini a wodi kan a wubenya no, fa ma Yehowa. Wɔyɛ Yehowa dea.+ 13 Afurum ba a odi kan de, fa oguan sesa, anyɛ saa a bu ne kɔn mu. Wo babarima biara a ɔyɛ abakan de, tɔ no.+ 14 Na sɛ akyiri yi wo ba bisa wo sɛ, ‘Eyi kyerɛ dɛn?’ a, ka kyerɛ no sɛ, ‘Yehowa de nsa a ɛyɛ den na eyii yɛn fii nkoafi wɔ Egypt.+ 15 Bere a Farao pirim ne koma kae sɛ ɔremma yɛnkɔ no,+ Yehowa kum abakan biara a ɔwɔ Egypt asaase so, efi onipa so kosi aboa so.+ Ɛno nti na mede anini a wodi kan nyinaa* rebɔ afɔre ama Yehowa no, nanso m’abakan biara de, mɛtɔ no.’ 16 Eyi bɛyɛ te sɛ ahyɛnsode wɔ wo nsa ho, na ayɛ sɛ biribi wɔ wo moma so*+ a ɛbɛkae wo, efisɛ nsa a ɛyɛ den na Yehowa de yii wo fii Egypt.” 17 Na bere a Farao maa wɔn kwan sɛ wɔnkɔ no, ɛwom sɛ na ɔkwan a ɛda Filistifo asaase so no nware, nanso Onyankopɔn amfa wɔn amfa hɔ, efisɛ Onyankopɔn kae sɛ: “Sɛ ɔko bi si a, nkurɔfo no bɛsesa wɔn adwene, na wɔasan akɔ Egypt.” 18 Enti Onyankopɔn ma wɔkɔnwonwan faa sare so wɔ Ɛpo Kɔkɔɔ no ho.+ Na bere a Israelfo no fi Egypt reba nyinaa, na wɔahyehyɛ wɔn sɛ asafodɔm. 19 Mose faa Yosef nnompe nso kaa ne ho kɔe, efisɛ na Yosef ama Israelfo no aka ntam, na ɔkae sɛ: “Ɔkwan biara so Onyankopɔn betwa n’ani abɛhwɛ mo, enti monhwɛ sɛ mode me nnompe bɛka mo ho afi ha akɔ.”+ 20 Afei wofii Sukot kɔsoɛɛ Etarm wɔ sare no ano. 21 Yehowa dii wɔn anim kyerɛɛ wɔn kwan. Ɔnam omununkum dum mu kyerɛɛ wɔn kwan awia,+ na ɔnam ogya dum mu maa wɔn hann anadwo, na ɛma wɔnantewee awia ne anadwo.+ 22 Omununkum dum no amfi wɔn anim awia, na ogya dum no nso amfi wɔn anim anadwo.+
^ Nt., “Ɔbarima biara a obebue yafunu ano.”
^ Anaa “yi no si nkyɛn.”
^ Nt., “obiara a obebue yafunu ano.”
^ Nt., “ade biara a ebue yafunu ano.”